SAWIRO: Maxaa Run Ka Noqday Saadaashii Cristiano Ronaldo Ee Shantii Ciyaartoy Ee Uu Mustaqbalka Kubbada Cagta Ku Sheegay? - Gool24.Net
SAWIRO: Maxaa Run Ka Noqday Saadaashii Cristiano Ronaldo Ee Shantii Ciyaartoy Ee Uu Mustaqbalka Kubbada Cagta Ku Sheegay?
Ciyaartoyda magaca wayn leh waxaa marar badan la waydiiyaa in ay magacaabaan ciyaartoyda da’yarta ah ee ay u arkaan in ay mustaqbalka kubbada cagta noqon doonaan, waxaana Cristiano Ronaldo su’aal qaabkan u dhignayd la waydiiyay sanadkii 2015 kii.
Cristiano Ronaldo ayaa shan sanadood ka hor ka jawaabay su’aashan wuxuuna magacaabay shanta ciyaartoy ee markaas da’doodu yarayd ee uu u arkayay in ay kubbada cagta saamayn wayn ku yeelanayaan.
Haddaba halkay hadda ku sugan yihiin shantii ciyaartoy ee uu Cristiano Ronaldo u xushay kuwii markaas ugu fiicnaa ee uu arkayay in ay saamayn wayn kubbada cagta ku yeelanayeen?
Cristiano Ronaldo oo markaas ahaa ciyaartoy Real Madrid ah ayaa saadaal fiican bixiyay wuxuuna inta badan saxay ciyaartoydii uu u arkayay in ay noqonayaan kuwa ugu saamaynta badan kubbada cagta.
Shantii magac ee uu markaas Ronaldo afkiisa uu ka xusay waxay kala ahaayeen Neymar Jr, Eden Hazard, Paul Pogba Memphis Depay iyo da’yarka hadda mustaqbalka wayn Real Madrid ku yeelanaya ee Martin Odegaard.
Markii uu Ronaldo su’aashan ka jawaabayay Martin Odegaard waxa uu ahaa wiil aad u yar balse la soo dareemayay in uu mustaqbal yeelanayo wuxuuna ugu danbayn amaah uu dibad meer ku ahaa ku soo cadeeyay in xili ciyaareedka cusub uu ka mid noqon doono kooxda uu Zidane ku shaqayn doono.
Wax shaki ahi kama jiraan in Ronaldo uu markaasba sida dadka u arkayay xaalada Neymar Jr, Eden Hazard iyo Pual Pogba oo inkasta oo ay da’yaraayeen haddana saamayn toos ah lahaa, balse saadaasha aan guulaysan ee Ronaldo ayaa noqotay Memphis Depay oo markaas Man United u ciyaarayay oo aan gaadhin heerkii uu filayay.
Cristiano Ronaldo oo ka jawaabayay ciyaartoyda da’yarta ahaa ee uu u arkayay in ay kubbada cagta qabsan doonaan ayaa yidhi: “Waxaad arkaysaa ciyaartoy badan oo awood leh, waxaan sheegi doonaa oo tusaale ah Odegaard-ka Madrid. Isagu wali waa 16 sano jir, laakiin waxaad arki karaysaa in uu ciyaartoy aad u fiican yahay”.
Ronlaldo uu qiimayntiisi 2015 sii watay ayaa yidhi: “Waxaa tusaale ah Hazard, No.7 ka Manchester United ee Depay ayaa isna sidoo kale ah cyaartoy fiican. Pogba iyo laga yaabee Neymar”.
Sababta uu Ronaldo erayga laga yaabee u raaciyay Neymar ayaa loo qaadan karaa in markaas ayna u sahlanayn in uu xidiga reer Brazil si fiican uga hadlo maadaama oo Ronaldo uu joogay Real Madrid isla markaana uu Neymar Jr joogay Barcelona.
Laakiin saadaashii uu Ronaldo markaas sameeyay ayaa inta ugu badan noqotay mid xaqiiqo ah iyada oo arinta ugu xiisaha badani tahay in Martin Odegaard oo mar loo arkayay inuu fashilmay uu hadda ka soo dhexbaxay ciyaartoyda La Liga ugu fiican ee da’yarta ah.
Halkan kaga bogo Xogta Shantii Ciyaartoy ee Uu Ronaldo Magacaabay Sanadkii 2015 kii Ee Da’yarta ahaa:
1- Martin Odegaard
Da’dii uu ahaa 2015: 16
Kooxdii uu joogay 2015: Real Madrid
Da’diisa hadda: 21
Kooxdiisa: Real Madrid (Amaah ayuu ku joogaa Real Sociedad)
Da’dii uu ahaa 2015: 23
Kooxdii uu joogay 2015: Barcelona
Da’diisa hadda: 28
Da’dii uu aha 2015: 24
Kooxdii uu joogay 2015: Chelsea
Da’diisa hadda: 29
Kooxdiisa hadda: Real Madrid
4- Pual Pogba
Da’dii uu ahaa 2015: 22
Kooxdii uu joogay 2015: Juventus
Da’diisa hadda: 27
kooxdiisa hadda: Man Utd
Da’dii uu ahaa 2015: 21
Kooxdii uu joogay 2015: Man Utd
Da’diisa hadda: 26
Kooxdiisa hadda: Lyon
Qiimayn lagu sameeyay aragtidii Ronaldo ee shan sanadood ka hor waxaa loo arkay in uu afar ka mid ah ku saxsanaa oo kala ah Neymar, Hazard, Odegaard isla markaana uu ku qaldamay Memphis Depay kaas oo markaas Man United joogay balse fashil uga baxsaday .